ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ဖိနပ်အိတ်ရောင်းတဲ့ ကလေးများနဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ - APANNPYAY
Home / ပြည်တွင်းသတင်း / ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ဖိနပ်အိတ်ရောင်းတဲ့ ကလေးများနဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ
ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်က ဖိနပ်အိတ်ရောင်းတဲ့ ကလေးများနဲ့ နိုင်ငံခြားသားများ
Apann Pyay 3:15 PM ပြည်တွင်းသတင်း Edit
ပြည်သူတို့၏အကြံပြုဖော်ပြချက်များအား အမှတ်(၂)ရဲလုံခြုံရေးကွပ်ကဲမှုအဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ်မြဝင်း မှပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ...
အောက်ဖော်ပြပါရွှေတိဂုံဘုရားတွင် ထိုသို့သောဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံမဖြစ်ပွားစေရန် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အောက်ရှိ ရဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ခွဲများမှ ရွှေတိဂုံဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဘုရားလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ဈေးဆိုင်ရှင်များအား ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးဇောင်းတန်းများ သန့်ရှင်းသာယာရေး၊ စည်ကမ်းတကျရှိရေးနှင့် ဘုရားဖူးပြည်သူများနှင့် နိုင်ငံခြားဧည့်သည်များ စိတ်အနှောက်ယှက်မဖြစ်စေရေးတွက် လိုအပ်သည်များကိုဂရုပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ထိုသို့သောအကြံပြုချက်နှင့် အပြုသဘောဆောင်သော ထောက်ပြမှုများအား အမြဲထာဝရကြိုဆိုပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှလည်းအကောင်းဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါသည်...
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Ma Chan Thiri ခင်ဗျာ...
Source - ကိုဘုန်း fb (၂၁-၃-၂၀၁၇)
ပွညျသူတို့၏အကွံပွုဖျောပွခကျြမြားအား အမှတျ(၂)ရဲလုံခွုံရေးကှပျကဲမှုအဖှဲ့မှူး ရဲမှူးခြုပျမွဝငျး မှပူးပေါငျးကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိ...
အောကျဖျောပွပါရှတေိဂုံဘုရားတှငျ ထိုသို့သောဖွဈစဉျမြိုး ထပျမံမဖွဈပှားစရေနျ မွနျမာနိုငျငံရဲတပျဖှဲ့အောကျရှိ ရဲလုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ခှဲမြားမှ ရှတေိဂုံဘုရားဂေါပကအဖှဲ့ဝငျမြား၊ ဘုရားလုံခွုံရေးဝနျထမျးမြားနှငျ့ စြေးဆိုငျရှငျမြားအား ရှတေိဂုံဘုရားကွီးဇောငျးတနျးမြား သနျ့ရှငျးသာယာရေး၊ စညျကမျးတကရြှိရေးနှငျ့ ဘုရားဖူးပွညျသူမြားနှငျ့ နိုငျငံခွားဧညျ့သညျမြား စိတျအနှောကျယှကျမဖွဈစရေေးတှကျ လိုအပျသညျမြားကိုဂရုပွုဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး ထိုသို့သောအကွံပွုခကျြနှငျ့ အပွုသဘောဆောငျသော ထောကျပွမှုမြားအား အမွဲထာဝရကွိုဆိုပွီး ရဲတပျဖှဲ့မှလညျးအကောငျးဆုံးပူပေါငျးဆောငျရှကျနပေါသညျ...
ကြေးဇူးတငျပါတယျ Ma Chan Thiri ခငျဗြာ...
Source - ကိုဘုနျး fb (၂၁-၃-၂၀၁၇)